🥇 ▷ OPPO Reno Ace waa mid rasmi ah, waxaa laga bilaabayaa Shiinaha 10-ka Oktoobar ✅
OPPO Reno Ace waa mid rasmi ah, waxaa laga bilaabayaa Shiinaha 10-ka Oktoobar
Waxaan helnay warkii ugu horreeyay ee OPPO Reno Ace inta lagu gudajiray munaasabaddii furitaanka ee taxanaha ‘Reno 2’ horaantii bishan halkaas oo lagu dhawaaqay in moobiilkan cusub uu imaan doono Shiinaha bisha Oktoobar. Maanta, shirkaddu waxay daabacday warqad ku taal Weibo si ay ugu dhawaaqdo inay bilaabi doonto Reno Ace Oktoobar 10.
OPPO Reno Ace wuxuu u istaagi doonaa inuu lahaado nidaamka batteriga ugu dhaqsaha badan adduunka, isagoo adeegsanaya tikniyoolajiyada lagu dalbo 65W Super VOOC. Toddobaadkii hore, ayuu madaxweyne ku xigeenka OPPO Brian Shen waxa uu sheegay in shirkaddu ay bilaabi doonto soo saar ballaaran oo tikniyoolajigeeda xawaare ahaan u sarreeya oo ah 65W bisha soo socota. Marka lagu daro tikniyoolajiyada ku-dallacsan ee tamarta badan, OPPO Reno Ace ayaa la rajaynayaa inay la timaado shaashad soo bandhigaysa heer cabbirkiisu yahay 90Hz iyo batari 4000mAh ah. Waxaa la qiyaasayaa in “Snapdragon 855+” ay yihiin chipset kaas oo kaxayn doona Reno Ace. Faahfaahinta kale ee ku saabsan tafaasiisha taleefanka hadda waa qarsoodi.
Reno Ace wuxuu noqon karaa calaamadda xigta ee OPPO xitaa iyadoo qeexitaanno ka sareyso Reno 2. Dhawaan, taleefan casri ah oo leh nambarka moodada PCKM70 ayaa lagu arkay TENAA. Telefoonku wuxuu leeyahay naqshad la mid ah Reno 2 laakiin leh muuqaalo horumarsan. Xaqiiqdii, waxay u egtahay nooca leh Snapdragon 855+ chipset iyo 5G taageerada Reno 2, laakiin waxay noqon kartaa Reno Ace. Xilligan xaadirka ah, waa inaan sugno warar dheeraad ah oo shaaca ka qaadi doona faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka casriga ah ee OPPO. (Xigasho)
Maxaad u maleyneysaa bilaabida OPPO Reno Ace oo loo qorsheeyay Oktoobar 10?